စာနယ်ဇင်း 2017 အတွက် TRF | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ | သတင်းစာများနှင့်အွန်လိုင်း
ပင်မစာမျက်နှာ ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း အဆိုပါစာနယ်ဇင်း 2017 အတွက် TRF
အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဆုကြေး Foundation မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်: အညစ်ညမ်းအသိအမြင်အတန်း; အားလုံးကျောင်းများတွင်ထိရောက်သော, ဦးနှောက်-based လိင်ပညာရေးများအတွက်ခေါ်ဆိုခ; ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်ငါတို့၏ကိုယ်အလှူငွေအပေါ် NHS ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျလိုအပျ သုတေသနလုပ်ငန်း porn- သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်။ ဤစာမျက်နှာတွင်သတင်းစာများနှင့်အွန်လိုင်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်ပဲ။
၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် - ခရိုအေးရှားမှအွန်လိုင်းသတင်းဝန်ဆောင်မှု။ Mary Sharpe နဲ့အင်တာဗျူးအပြည့်အစုံကိုရရှိနိုင်ပါသည် ဒီမှာ Croatian တွင်။ Google Translate English သို့ကြောင့်ရွေ့လျားကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ပါပဲ။ အင်တာဗျူး၏နောက်ထပ်, ကြာကြာဗားရှင်း 16 နိုဝင်ဘာလ 2017 အပေါ်အပတ်စဉ်သတင်းစာ Glas Koncila အတွက်ထင်ရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက် - ရေဒီယို Sputnik အင်တာဗျူးမှနောက်ဆက်တွဲ
အပြည့်အဝဆောင်းပါးရရှိနိုင်ပါသည် ဒီမှာ အွန်လိုင်း။ အင်တာဗျူးအပေါ်တစ်ဦးက TRF ဘလော့ဂ်ဖြစ်ပါသည် ဒီမှာ သင်အပြည့်အဝတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးကိုနားထောင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက် - PoliceProfessional.com တွင် TRF၊ Nick Hudson မှဆောင်းပါး
9 အောက်တိုဘာ 2017 - အမျိုးသားသတင်းစာ၌ TRF
9 အောက်တိုဘာလ 2017
အောက်တိုဘာ ၄ ရက် ၂၀၁၇ - ရှေ့စာမျက်နှာတွင် TRF ပါ ၀ င်သည်
၂၀၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၇ - ဆုသည်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် Edinburgh ရှိ Coolidge Effect အတွက်တရားဝင်ပံ့ပိုးသူများဖြစ်သည်
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက် - Reward Foundation သည် Edinburgh ရှိ Coolidge Effect အတွက်တရားဝင်ပံ့ပိုးသူများဖြစ်သည်
12 စက်တင်ဘာလ 2017
6 စက်တင်ဘာလ 2017
အပြည့်အဝခရစ်ယာန် Institute မှဆောင်းပါးအွန်လိုင်းရရှိနိုင် ဒီမှာ။ ထိုသို့တစ်ဦးကဗားရှင်းအဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်ခရစ်ယာန်ဘာသာက်ဘ်ဆိုက် jesus.ch ပျေါမှာထငျရှား ညစ်ညမ်း motiviert Jugendliche zu sexuellen Straftaten 13 စက်တင်ဘာလ 2017 ပေါ်မှာ။
စကော့တလန် Daily Mail က,4စက်တင်ဘာလ 2017 ။ ဇာတ်လမ်းကိုလည်းအွန်လိုင်းရရှိနိုင် ဒီမှာ.
အဆိုပါသံတော်ဆင့်,4စက်တင်ဘာလ 2017, စာမျက်နှာ 12 ။ အွန်လိုင်းစရရှိနိုင်ပါသည် ဒီမှာ. ဒါဟာအဖြစ်အခုမှခဲ့သည် အောက်မှာ-18s လိင်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်မြင့်တက်မှုအတွက်အပြစ်တင်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း on Aadhu.com ထိုနေ့တွင်ပင်။ ဂျာမန်ဘာသာစကားဗားရှင်းအဖြစ်သြစတြီးယားဝက်ဘ်ဆိုက် 'futurezone technology news' တွင်ဖော်ပြခဲ့သည် Schottland gibt အွန်လိုင်း-Pornos Schuld အနေနဲ့လိင်-Verbrechen.
တနင်္ဂနွေ Post ကို,3စက်တင်ဘာလ 2017 ။ ဇာတ်လမ်းကိုလည်းအွန်လိုင်းရရှိနိုင် ဒီမှာ။ ဗားရှင်းများကိုဒန်ဒီနှင့်နယူးကာဆယ်တို့တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Sunday Mail, သြဂုတ် ၂၀ ရက်၊ 20 ။ ဤပုံပြင်ကိုအွန်လိုင်းတွင်လည်းရနိုင်သည် ဒီမှာ.
အဆိုပါ Courier3မတ်လ 2017
ဤအပြုသဘောဆောင်သောစကော့တလန်ဇာတ်လမ်း၏တည်းဖြတ်ထားသောဗားရှင်းကို addictionhelper.com တွင်တွေ့နိုင်သည် ဒီမှာ.